Local Media - कोभिड-१९ भ्याक्सिन १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन नलगाइने?
कोभिड-१९ भ्याक्सिन १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन नलगाइने?
प्रकाशित समय: शुक्रवार, ०५ : १० बजे मंसिर १९ गते
काठमाडौं,विश्वभर यतिबेला कोभिड-१९ भ्याक्सिनको तीव्र प्रतिक्षा भइरहेको छ। भ्याक्सिनहरु आपतकालीन प्रयोगको अन्तिम चरणमा समेत पुगिसकेका छन्।
अमेरिकन कम्पनी फाइजरले बनाएको कोभिड भ्याक्सिन बेलायतले आफ्ना जनतालाई लगाउन अनुमति दिएको समाचार समेत आइरहेको छ।
उनले भने, ‘१४ वर्ष मुनिका व्यक्तिमा भ्याक्सिन परीक्षण भएको छैन। यो उमेर समूहमा कोरोना भाइरसको संक्रमणदर, अन्यलाई सार्न सक्ने क्षमता, असर र मृत्युदर कम छ। अर्थात् यो समूह अन्य उमेर समूहभन्दा कम जोखिममा पर्ने भएकाले विश्वमा यो उमेरलाई खोप दिइने छैन।’
त्यसपछि आउने १७ प्रतिशत भ्याक्सिन सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु, दीर्घरोगी र वैदेशिक श्रममा जाने श्रमिकका लागिका दिइने योजना बनाइएको छ।
त्यसबाहेक, सरकारले खरिद गर्ने खोप लागि पनि सरकारले जोखिमको आधारमा दिने योजना बनाएको छ।
नेपालमा फाइजरको खोप आउने सम्भावना नभए पनि अन्य थर्ड फेजमा ट्रायल भइरहेका खोपहरु आउने छन्।
फाइजरको खोप नेपाल नआउने कारण भने खोप भण्डार गर्ने माइनस ७० डिग्री सेल्सियसको कोल्ड चेन नेपालमा छैन। तत्काल बनाउन समेत सम्भव नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने खोपको लागि तयारी गरेको छ।
हाल नेपालमा दिइने खोपहरु २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गरिन्छ।
कल्पना बस्नेत, स्वास्थ्य खबर